BUDDHIST TERMS' Dictionary: MIDDLE REGION - မဇ္ဈိမဒေသ
MIDDLE REGION - မဇ္ဈိမဒေသ
MIDDLE REGION Majjhimadesa
မဇ္ဈိမဒေသ - ဇမ္ဗုဒိပ်ကျွန်း၏ အလယ်ဗဟိုကျသောအရပ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှ အရှေ့သို့လားသော် ဇင်္ဂလနိဂုံး၊ အရှေ့တောင်သို့လားသော် သလ္လာဝတီမြစ်၊ တောင်သို့လားသော် သေတကဏ္ဏိကနိဂုံး၊ အနောက်သို့လားသော် ထူဏပုဏ္ဏားရွာ၊ မြောက်သို့လားသော် ဥိသိရဒ္ဓဇတောင်၊ ဤအတွင်းအရပ်သည် မဇ္ဈိမဒေသ မည်၏။ မဇ္ဈိမဒေသသည် အလျားယူဇနာ (၃၀၀)၊ အနံယူဇနာ (၁၅၀)၊ အ၀န်းယူဇနာ (၉၀၀) အပိုင်းအခြားရှိ၏။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် စကြာမင်းတို့သည် ထို မဇ္ဈိမဒေသ၌သာ ဖြစ်ပေါ်ကြမြဲ ဖြစ်သည်။
The region occupying the middle part of Jambudῑpa, the Southern Island (according to Buddhist cosmology)
It lies in the north-eastern part of India today and is bounded as follows; Jᾱngala hamlet in the east, the Sallavati River in the south-east, Setakaṇṇika hamlet in the south,aBrahmin village named Thῡṇa in the west, and the Usiraddhaja mountain in the north. The length of the Middle Region is three hundred yojanas, its breadth is one hundred and fifty yojanas and its circumference is nini hundred yojanas. Buddhas and Universal Monarchs appear only in this region.